एयरपोर्टमा तस्करको असफल कम्पनीलाई फोहोर उठाउने जिम्मा ? | My News Nepal
एयरपोर्टमा तस्करको असफल कम्पनीलाई फोहोर उठाउने जिम्मा ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै सरोकारवालाई फोहोरको चिन्ता हुने गरेको छ । पछिल्लो केही बर्षयता भने केही सुधारसमेत भएको थियो । तर, पुनः त्रिभुवन विमानस्थलमा फोहोरमा राजनीति सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष विमास्थल कार्यालयले टेण्डर गरेर सफाई गर्नका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने गरेको छ ।
यस वर्ष पनि साउन १ देखि सफाई गर्न नयाँ टेण्डर गरेको थियो । तर, प्राविधिक रुपमा पास नभएको कम्पनीलाई दिन चलखेल सुरु भएको छ । गत जेठ ३० गते अन्तिम समय राखेर टेण्डर निकालेको टेण्डरमा दुई कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
हाल डेढ वर्षदेखि सफाईको जिम्मा पाएको कम्पनी इनोभेटिभ एचआर सोलुसन प्रालि र विगत १० वर्षमा अधिपत्य जमाएर बाहिरिएको सोनिगः सर्भिस प्रालि रहेको जियो । यस प्रस्तावमा सोनिग प्राविधिक रुपमै असफल कम्पनी हो । सोनिग विमानस्थलमा अधिपत्य जमाइरहेका व्यपारी सुवास श्रेष्ठको कम्पनी हो ।
प्राधिकरणले यो सफाई प्रस्तावमा इनोभिट मात्रै प्राविधिक रुपमा पास भएको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । एक वर्षका लागि विमानस्थलले ५ करोड ४० लाख रकम भ्याट बाहेकको प्रस्ताव आब्हान गरेको थियो ।
प्राविधिक रुपमा असफ कम्पनीले उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसँगको मिलेमतोमा प्रस्ताव उल्टाउन खोजेको हो । सोनिगःसँग आर्थिक लेनदेन गरेर महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले प्राविधिक रुपमा असफल कम्पनीलाई दिन चलखेल गरेको पाईको छ । समाचार स्रोतः काराेबार दैनिकबाट ।